AIPC, ICCA ary UFI dia manangana ny Global Alliance
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » AIPC, ICCA ary UFI dia manangana ny Global Alliance
Fikambanana telo manerantany manompo ny Indostria fihaonana iraisam-pirenena no hiara-miasa akaiky kokoa amin'ny ho avy: AIPC (The International Association of Convention Centres), ICCA (The International Congress and Convention Association), ary UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) nanaiky ny hanangana Alliance manerantany. Izy ireo miaraka dia hanamora ny fiaraha-miasa ary hiteraka tombony misimisy kokoa sy mifanaraka tsara kokoa ho an'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana telo.
"Isika rehetra dia fikambanana manana mpikambana sy fomba fijery manerantany ary efa mifameno ny hetsika ataon'ny tsirairay amin'ny fomba samihafa", hoy i Aloysius Arlando, filohan'ny AIPC. "Saingy, rehefa mivoatra ny maodelin'ny fampirantiana, kaongresy, kaonferansa ary karazana fivoriana fivorian'ny orinasa, dia vao mainka mihalehibe ny fifandimbiasan'ireo fikambanana manerantany manompo ny indostria."
“Mitondra ny loza mety hitranga amin'ny fifaninanana ny fanoloana ny fiaraha-miasa ho toy ny hery manosika ireo fikambanana indostrialy. Miaraka amin'ny Global Alliance, isika telo dia misafidy sanda ho an'ny mpikambana ao aminay, misafidy ny fiaraha-miasa noho ny fifaninanana ”, hoy i Craig Newman, filohan'ny UFI.
Nanaiky ny hanomboka programa handinihana ny fifanakalozana sy ny fifandimbiasana amin'ny sehatra efatra lehibe ny firaisana: ny atiny fanabeazana, ny fikarohana, ny fenitra ary ny fanentanana. Hampihatra ny rafitra fiaraha-miasa malefaka eo amin'ireo fikambanana telo izy mba hahatratrarana ireo tombontsoa ireo raha tsy manimba ny fifantohana sy ny sehatry ny fikambanana mpikambana tsirairay.
Ireo mpiara-miombon'antoka telo dia hanomboka amin'ny fifanakalozana fanabeazana andiany fampidirana ny fahalalan'ny tsirairay ao anaty kaonferansa misy azy ireo ary hanombohana ny fampifanarahana ireo fomba fanao any amin'ny sehatry ny fanao mahazatra toy ny asa fikarohana sy fanentanana, manomboka avy hatrany. Mandritra izany fotoana izany dia manomboka fifanakalozana ara-dalàna eo amin'ny samy mpitarika izy ireo mba hampifanaraka ny fahalianany amin'ny olana toy ny fenitra, ny voambolana ary ny fomba fanao tsara indrindra.
"Antenainay sy antenainay fa ireo hetsika voalohany ireo dia hitarika amin'ny famaritana ny fotoana ahafahan'ny fiaraha-miasa bebe kokoa amin'ny sehatry ny fiaraha-mientana sy ny tombotsoan'ny mpikambana ato aminay", hoy i James Rees, filohan'ny ICCA.
Ho fanampin'ny vokatra azo ampiasaina eo noho eo, ny mpiara-miasa dia mino fa ny Alliance dia manolotra fahafaha-manatsara ny fitokisan'ny indostria iray manontolo amin'ny alàlan'ny fanomezana fiara ho an'ny fampandrosoana ny tsy fitoviana lehibe ao anatin'ny sehatry ny indostria nifanarahana. "Mazava ho azy fa ny fifanakalozana atiny sy ny fomba fijery dia hanome fidirana tsara kokoa ho an'ny mpikambana amin'ny loharanom-pahalalana fanampiny, saingy misy antony iray hafa eto dia ny fahafaha-mampitombo ny tsy fitoviana amin'ireo faritra izay mifanindry zareo," hoy i Rod Cameron, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny AIPC. "Tsy hanatsara ny zava-bitan'ny indostria fotsiny io fa hampisondrotra ny fahatokisan-tenantsika eo amin'ireo sehatra indostrialy hafa."
"Amin'ny famoronana fampidirana tsara kokoa ny ezaka ataontsika, dia ho afaka hampiasa tsara ny fampiasam-bolan'ny tsirairay isika ary hamorona fahombiazana bebe kokoa hampiasana ny fotoanan'ny mpikambana - iray amin'ireo loharano sarobidy indrindra ananantsika rehetra amin'izao fotoana izao", hoy i Senthil Gopinath, tale jeneralin'ny ICCA .
"Midika izany fa azontsika atao ny manatsara ny tombony azontsika omena ny mpikambana ao aminy ary sady mamorona sehatra ho fanatontosana mahomby ny volavolan-kevitry ny indostria ataontsika ho any amin'ireo faritra izay tena ilana karazan'asa sy fahaizana manokana io", hoy ihany i UFI CEO Kai Hattendorf.
Ny Alliance Organisations dia:
AIPC maneho ny tamba-jotra manerantany misy ivon-toerana mitarika 190 mahery any amin'ny firenena 64 miaraka amina fandraisana anjaran'ireo matihanina maherin'ny 900 amin'ny sehatry ny fitantanana. Izy io dia manolo-tena amin'ny famporisihana, fanohanana ary fanekena ny fahamboniana amin'ny fitantanana ivon-toerana fivoriambe, mifototra amin'ny traikefa sy fahaizana isan-karazany amin'ny maha-mpikambana azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary mitazona fandaharam-pianarana, fikarohana, tambajotra ary fenitra feno hanatanterahana izany.
Ny AIPC dia manaiky ihany koa ary mampiroborobo ny anjara toeran'ny indostrian'ny fihaonambe iraisam-pirenena amin'ny fanohanana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny matihanina ara-toekarena ary koa ny fanatsarana ny fifandraisana manerantany eo amin'ny tombontsoan'ny orinasa sy ny kolontsaina.
Ny mpikambana AIPC dia fotodrafitrasa namboarina ho zava-kendrena izay tanjona voalohany dia ny handraisana sy hivoriana, hanaovana fivoriambe, kongresy ary fampirantiana.
ICCA - ny International Congress and Convention Association - dia misolo tena ireo mpamatsy vola eran-tany amin'ny fikirakirana, fitaterana ary fandraisana ireo fivoriana sy hetsika iraisam-pirenena, ary ankehitriny dia misy orinasa sy fikambanana mpikambana maherin'ny 1,100 amin'ny firenena 100 manerantany. Hatramin'ny niorenany 55 taona lasa izay, ICCA dia misahana manokana ny sehatry ny fivorian'ny fikambanana iraisam-pirenena, manolotra angon-drakitra tsy manam-paharoa, fantsom-pifandraisana ary fotoana mety hampivoarana orinasa.
Ny mpikambana ICCA dia misolo tena ireo toerana avo indrindra manerantany sy ireo mpamatsy za-draharaha indrindra. Ireo mpanamory fihaonana iraisam-pirenena dia afaka miantehitra amin'ny tamba-jotra ICCA hahita vahaolana amin'ny tanjon'ny hetsika rehetra: ny fisafidianana toerana; torohevitra ara-teknika; fanampiana amin'ny fitaterana solontena; drafitra fivoriambe feno na serivisy ad hoc.
UFI no fikambanana manerantany an'ny mpikarakara tradeshow manerantany sy mpandraharaha ivon-toeran'ny fampirantiana, ary koa ny fikambanan'ny fampirantiana nasionaly sy iraisam-pirenena lehibe, ary mpiara-miasa voafantina amin'ny indostrian'ny fampirantiana.
Ny tanjon'ny UFI dia ny hisolo tena, hampiroborobo ary hanohana ny tombotsoan'ny mpikambana ao aminy sy ny sehatry ny fampirantiana. Ny UFI dia misolo tena mivantana ireo mpiasa eo amin'ny sehatry ny fampiratiana 50,000 52 manerantany, ary miasa akaiky miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanam-pirenena sy isam-paritra 800. Fikambanana mpikambana manodidina ny 90 any amin'ny firenena 1,000 sy faritra eran'izao tontolo izao no voasoratra anarana ho mpikambana ankehitriny ary maherin'ny XNUMX ny varotra iraisam-pirenena mivarotra am-pireharehana ny mari-pahaizana nankatoavin'ny UFI, antoky ny kalitaon'ny mpitsidika sy ny mpanao fampiratiana. Ireo mpikambana ao amin'ny UFI dia manohy manome ny haino aman-jery iraisam-pirenena haino aman-jery marketing tsy manam-paharoa mikendry ny hampivelatra ny asa aman-draharaha mifanatrika mivantana.
Ny fizahantany dia tokony hitondra tombony lehibe kokoa ho an'ny rehetra
Airways New Zealand dia manokatra toerana fanahafana ny fifamoivoizana (ATC) mandroso any Beirut, Libanona